Isbedelka Suuq-geynta Suuqa? | Martech Zone
Isbedelka Suuq-geynta Suuqa?
Isniin, February 18, 2013 Isniin, February 18, 2013 Jenn Lisak Golding
Sida aan wada ognahay, iibka iyo suuqgeyntu si isdaba joog ah ayey isu beddelayaan. Sidaa darteed, iibka iyo suuqyada suuqgeynta ayaa isbedelaya. In kasta oo laga yaabo inayan jeclaan, haddana waa inaan la qabsanaa.
RainToday.com ayaa goor dhaweyd daabacday qoraal mowduucan, oo aan ku soo qaadaneyno midkeenna suuqgeeyayaasha otomaatiga suuqgeynta, Xuquuqda Interactive. Troy Burk, agaasimaha guud iyo aasaasaha, wuxuu sameeyaa qodobo wanaagsan. Laakiin waxaa jira hal aragti oo cabsi ku ah suuqleyda:
Sida laga soo xigtay Forrester Research, ku dhowaad kalabar dhammaan suuqleyda B2B waxay yiraahdaan waxay xiraan wax ka yar 4% dhammaan hoggaamiyeyaasha suuq-geynta. Intaa waxaa sii dheer, in ka yar 25% dhammaan dakhliyada waxaa loo aaneynayaa suuq geynta.
Suuqgeeye ahaan, taasi waa helitaan cabsi leh. Ka fikir taas - waa shaqadeena inaan abuurno dariiqyo oo aan kobcino. Haddii aan kaliya beddeleyno 4%, markaa heerarkeenna c-yada ayaa laga yaabaa inaysan ku faraxsanayn annaga oo aan dooneynin inay miisaaniyadda ku bixiyaan dadaalkeenna. In kasta oo tirakoobkani jiro, tani runti maahan kiiska oo dhan.
Waxaan lagama maarmaan u nahay urur kasta iyo dhammaanba. Xaqiiqdii, halka qiyaastii 75% ee dakhligu ka yimaado kor u iibinta iyo u diritaanka, miisaaniyadaha suuqgaynta badankood waxay ku sii jeedaan abuurista iyo kobcinta hagitaanno cusub oo ku saabsan mashiinka suuqgeynta. Waxaan nahay kuwo waxtar leh! Oo loo baahan yahay.
Dhibaatada guud ee maanta ka jirta dunida dhijitaalka ah ayaa isku toosinaysa iibka iyo suuqgeynta. Dhaqan ahaan, kuwani waligoodba waxay ahaayeen laba waaxood oo kala duwan. Iyadoo aan loo eegin haddii ay yihiin ama aysan ku jirin da'da cusub, waxaa muhiim ah in qorshayaasha suuqgeynta iyo qorshayaasha iibintu ay isku soo beegmaan oo ay yeeshaan nidaam rasmi ah oo meesha ka socda si gacan-ka-dhiibku u noqdo mid aan hagaagsaneyn oo waqtigiisa ku habboon. Qalabaynta suuqgeynta ayaa ah hab tan lagu sameeyo. Iibintu waxay u dirtaa suuq geynta cinwaanka emailka hogaamiyaha cusub, suuq geynta ayaa kudareysa nidaamka, nidaamka otomaatiga suuq geynta wuxuu abuuraa oo la socda astaanta macaamiisha, labada dhinacba hada waxay kujiraan “aqoon” waxa ay rajadu sameyneyso iyo goorta ay sameyneyso. Taasi had iyo jeer maahan socodsiinta shaqada, laakiin xaqiiqdii waxay aasaas u tahay waxa noqon kara khariidad guuleysan oo lagu xirayo tilmaamo badan oo suuqgeyn ah.
Ujeeddooyinka suuq-geynta suuq-geynta iyo suuq-geynta iibku way ka duwanaan karaan, laakiin wicitaanada-ficilka iyo nolosha suuqgeynta ayaa lamid ah, marka laga eego dhanka dijitaalka. Maxaa loo wada shaqeyn waayey?
Suuqgeynta iyo iibintu si siman ayey muhiim ugu yihiin suuq geynta nolosha - aan joojino dagaalka oo aan bilowno inaan u shaqeyno sidii mid.
Tags: isgaarsiintasuuq-geynta suuqasuuq madowSaadaaliniibinta jilitaanka
M-Ganacsigu Wuxuu Sameynayaa Horumar
Feb 18, 2013 markay ahayd 1:40 PM
Xaqiiqdii tani waa arrin aan soo maray sidoo kale. Maaha daruuri inay jirto wax jacayl ah oo u dhexeeya suuqgeynta iyo iibinta, laakiin waa inaan leenahay mudnaano kala duwan. Suuqgeynta (adduunyadayda) waxay ku saabsan tahay cabbiraadaha iyo ROI (laga yaabee inay tahay shey marwalba la caddeeyo qiimaheena), halka iibku uu aad uga walaacsan yahay is-dhexgalka hal mar ah iyo xiridda macmiil walba hal mar.
Khadka ugu weyn ee naga go'ay wuxuu si fudud ula socdaa godka gebi ahaanba illaa habka xiritaanka iibka. Waan la socon karaa tilmaamaha aan keenay, laakiin waa inaan ku tiirsanaano shaqaalaha iibka si aan u diiwaan galino oo aan ula socdo dakhliga dhabta ah ee ku habboon, taas oo aan had iyo jeer ahayn kiiska. Isku dar taas xaqiiqda ah in warshadeenna (adeegyada khidmadaha aadka u sarreeya, inta badan), hoggaankeennu waxay ka imaan karaan tiro boqolaal ah oo taabasho ah, runtiina waxaan ku dhajin karnaa ROI waxqabad kasta oo gaar ah way adkaan kartaa.
Feb 18, 2013 markay ahayd 2:56 PM
Waad ku mahadsantahay faallooyinka, Tyler! Waan ku raacsanahay faalladaada ku saabsan mudnaanta kala duwan. Taasi waa run. Laakiin waxaan u maleynayaa in haddii aan labadeenuba ogaanno in dadaalkeennu uu u shaqeynayo hal ujeedo iyada oo la sameynayo waxqabadyo kala duwan, markaa waxaan isku waafajin karnaa mudnaantayada si ka wanaagsan sidii hore (oo aan goosan karno abaalmarinta!).
Ilaa iyo inta ROI tagto, marwalba waxaan u maleynayay inay adagtahay in la go'aamiyo ROI iibka ama suuq geynta guud ahaan. Waxaa jira hawlo aan qabanno oo aan "sicir qiimahoodu" ku dul oolli karin. Xaqiiqdii, wakiilka iibka ayaa laheyn kara qaxwo leh rajo macquul ah waana ay gujiyeen, waana marka rajadaasi go'aansatay inay rabaan inay la shaqeeyaan shirkaddaas. Laakiin beddelaaddu ma dhicin illaa 2 bilood ka dib sababo kale oo gudaha ama dibaddaba ah. Adduunyada “barta taabashada badan”, ma naqaanno goorta aan saamaynta sameynay. Hawlaha noocee ah ayey leeyihiin ROI? Dhammaan waa wax aan caddayn oo adag in la go'aamiyo.
Feb 18, 2013 markay ahayd 3:36 PM
Xaqiiqdii waan ogolahay. Maaha dhibaato sahlan in wax laga qabto. Qaabkeygu waa inaan asal ahaan ka sameeyo falanqeyn tirakoob ah dusha sare ee mashiinkaaga oo aan go'aamiyo noocyada waxqabad ee kuugu qiimaha badan adiga.
Marka, tusaale ahaan haddii aad dhahdo in 2% ka mid ah taraafikada dabiiciga ah ee bartaada ku taal ay soo gudbiso codsi macluumaad dheeri ah, iyo 2%, 30% aakhirka loo beddelo iibka, iibintana ay gaarayaan $ 100k, markaa waxaad sameyn kartaa falanqeyn qiyaaso qiimaha booqde kasta oo dabiici ah oo aad abuurto - asal ahaan ROI oo si toos ah ugu xidhan waqtigaaga / dadaalkaaga SEO.
Waad saxan tahay in dhibco badan oo taabasho ay adkeeyaan, in kastoo. Oh - igu kalsoonow - intaas oo dhan waan ka ogahay. Laakiin, waxaan u maleynayaa inay tahay inaan ugu yaraan yeelanno cabbiraad qiyaas ah si aan u hagaajino howlahayaga, aan u hagaajino doolarkeena, isla markaana aan u hagaajino waqtigeena. (Tusaale ahaan, ma inaan ku qaadanaa 10 saacadood oo dheeri ah bishiiba ka shaqeynta SEO? - si fiican ha loo eego kharashka iyo celinta).
Feb 18, 2013 markay ahayd 3:40 PM
Qodobbo waaweyn, Tyler. Waad ku mahadsantahay fikirkaaga! Kaliya waan kugu raacay Twitter. Waxaan rajeynayaa inaan inbadan maqlo.